Ragga Daryeelka Wajiga - Talooyin ku Saabsan Ragga Qurxoon | Ragga Stylish
Daryeelka wajiga ee ragga
Alicia tomero | | La xiiray, Is-qurxinta, Daryeelka shaqsiyeed
Ragga horeyba waxay xooga saarayaan daryeelka maqaarkooda. Sameynta daryeelka wajiga ragga waxay isku dayeysaa inay hagaajiso muuqaalkooda, ku muujiso maqaarkooda qurux badan iyo ssi fiican u fahan naftaada. Maanta waxaan suuqa ku haynaa tiro badan oo ka mid ah badeecadan oo loogu talagalay ragga iyo dhammaan noocyada maqaarka.
Daryeelka wajiga ee ragga waxay u baahan tahay isla nidaam iyo anshax la mid ah daaweynta. Uma qalanto in la mariyo kareem kasta oo aan ku aragno aragtida koowaad kana yar kan dumarka, tan iyo maqaarka ninku gabi ahaanba wuu ku kala duwan yahay sifooyin kala duwan oo aan hoos ku arki doonno.
1 Sidee ayay wajiga daryeelka ragga u noqon karaa?
2 Hawl maalmeed
3 Daaweynta dabiiciga ah
4 Daryeel dheeri ah iyo talo bixin maqaarkaaga ah
Sidee ayay wajiga daryeelka ragga u noqon karaa?
Waa muhiim in la ogaado taas maqaarka ragga ayaa aad uga dhumuc weyn kan haweenka, Marka laga reebo inay u badan tahay inay ku jiraan qanjidhada dheecaanka badan leh iyo inay noqdaan kuwa soo noqnoqda oo ay ku dhacaan finanku. Sababtaas awgeed waxay u baahan yihiin daryeel gaar ah kadib markaad xiirto maxaa yeelay maqaarkaaga ayey banaanka u soo saari doonaan.
Nadiifi wajiga maalin kasta. Waa muhiim inaad raacdo caadada nadaafadda maalinlaha ah maxaa yeelay maqaarka ragga waxaa ku jira qanjirro badan oo dheecaan leh, sidaas darteed waa muhiim nadiifi dhammaan dufanka iyo wasakhda ku ururay maalintii oo dhan. Jel nadiifin ah waa in la isticmaalaa subax kasta iyo ka hor intaadan seexan.
Sifee maqaarka: Sida nadaafad ahaan aad ayey muhiim u tahay maqaarka ka soo daa ugu yaraan laba jeer usbuucii. Kareemka noocan ah waxaa loo yaqaannaa soo bixid (exfoliating) iyo culeyskeeda firida ay ku caawiso si fiican u qaad dhammaan unugyada maqaarka ee dhintay.
Ka taxaddar xiirashadaada. Waxay u eg tahay tolida iyo heesaha, laakiin waxaas oo dhan gadaashooda waxaan leenahay maqaar xanuunsan marka aan xiiranahay. Si loo fududeeyo howsha ayaa ah ku habboon in la sameeyo qubeyska ka dib, maadaama timuhu ay aad u jilicsan yihiin oo ay aad u fududaan doonto in la gooyo. Isticmaal xumbo xiirashada ama jel ku habboon nooca maqaarkaaga oo iska hubi in garka mandiilku ku sugan yahay xaalad qumman.
Isticmaal Xiirashada Kadib. Waa inaad dib uhesho xasilloonida maqaarka kadib xiirista. Nadiifi dhamaan haraaga wixii ku jiray ee jel ama xumbo iyo haddii ay macquul tahay biyo qabow, ka dibna tuwaal ku qalaji. Codso Ka Dib Xiirashada Kadib aagga la xiiray oo dhan iyo dhaqdhaqaaq wareeg ah, looshan wuxuu kaa caawin doonaa dejinta cuncunka suurtogalka ah iyo jeermiska jeermiska yar ee la soo saaray.
Qoyaanka maqaarka. Aad ayey muhiim u tahay ku qoyso maqaarka wajiga kareem, maaddaama xiirashada kadib aysan biyo siinaynin ku filan. Waayo, raadi kareem iyadoo loo eegayo nooca maqaarkaaga. Sida caadiga ah, ragga waxay leeyihiin maqaar aad u badan oo saliid leh, sidaa darteed waxaan u baahanahay kareemo aan dufan lahayn inta badan si aan loo dhergin daloolada.
Isticmaal dusha isha. Ha iloobin talaabadan maadaama ay ku habboon tahay waxay si weyn u hagaajisaa laalaabka hareeraha indhahaaga oo laalaab laalaabkaaga.
Qoyaan kareemka habeenkii ama serum. Raacida nidaamkan iyo codsashada ka hor sariirta waxay ku habboon tahay ragga ka weyn 40. Waxaad ku ogaan doontaa natiijooyinkeeda toddobaadyo yar gudahood, tan iyo kareemada noocaan ah sifiican ayey u shaqeeyaan habeenkii.
Maaskarada dabiiciga ah inta lagu jiro usbuuca. Maaskarada noocan ahi waa tabarucaad dheeri ah oo si fiican loogu daryeelo maqaarka wejiga. Haddii aad jeceshahay inaad daryeesho nafsadaada waxaad samayn kartaa waji-gashi aad iska leedahay, tan waxaan u soo jeedinaynaa maqaalkan sida loo sameeyo kuwa ugufiican waxyaabaha dabiiciga ah.
Garka daryeel. Daryeelka wejigu waa la mid yahay, si isku mid ah ayaan u xoqin karnaa isla markaana aan u quudin karnaa maqaarkayga si isku mid ah Waxaa jira suuqa daryeelka gadhka alaabooyin gaar ah si loo nadiifiyo loona mariyo saliidaha si aad u qoydo timahaaga, markaa waxay noqon doontaa qurux iyo dhalaal.
Daaweynta dabiiciga ah
Raggaas oo aan jeclayn inay kareemyada ku dhex isticmaalaan suuqa, waxaan u samayn karnaa daaweynno u gaar ah si aan maqaarkayaga u daryeelno. Nadiifinta maalinlaha ah waxaan sii wadaynaa isla maydhkii, mid subixii midna habeenkii. Laga yaabaa in aad biyaha ku dar qayb liin dhanaan ah ama caano cusub.
Si aad maqaarka u xoqdo waad awoodaa isticmaal nadiifiyeyaasha guryaha. Waxaan isku qasan doonaa qaado oats, qaado biyo ah iyo milix kale oo fiican. Si taxaddar leh ayaad u xoqdaa wejigaaga dhammaan geesaha, u daa daqiiqado oo biyo raaci biyo qabow.
Si loo waraabiyo waxaan awoodnaa isticmaal maaskarada dabiiciga ah Sidaan horayba u soo sheegnay, isticmaalka malabka iyo yicibta ayaa ah qaab fiican. Si aan maqaarka u qaboojino kadib mashquul maalin kadib waan awoodnaa mari ceeryaamo wajiga leh faleebooyin sida chamomile iyo shaah cagaaran. Waxay maqaarkaaga uga tagi doonaan gebi ahaanba dabacsan.
Daryeel dheeri ah iyo talo bixin maqaarkaaga ah
Alaabada ku saleysan retinol waa kuwo heer sare ah oo awood u leh inay yeeshaan maqaar qurux badan, ugu yaraan waa waxa ay takhasusayaashu kugula talinayaan. Waxay kaa caawineysaa yareynta duuduubka, ceebaha, iyo finanka.
Talo soo jeedin kale ayaa ah in la isku dayo isticmaal qorrax madoobaad, waa daryeelka ugu fiican ee maqaarkaaga. Xitaa waxaan sameyn karnaa warbixin fuuq bax ah cabista biyo aad u tiro badan maalin kasta. Laguma talin isticmaal kafee, tubaako, sonkor iyo aalkolo, waa maaddooyin aan faa'iido u lahayn ilaalinta maqaarka midabka ku habboon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Daryeelka wajiga ee ragga
Amaano qurux badan
Ku xirnaanshaha lammaanaha: sida looga gudbo